Nezvedu - K-Tek Machining Co., Ltd.
K-Tek Kugadzira Co, Ltd. rakaumbwa muna 2010, riri "World Factory" -Dongguan, China, kufukidza imwe nzvimbo dzinopfuura zviuru 20,000 mativi metres, nyanzvi zvakarurama muchini zvikamu kugadzira uye akapfuura ari ISO9001: 2015 advertising.
Tinogona kugadzirisa kugadzirwa kwemhando dzese dzeakarurama michina zvikamu zvinoenderana nezvinodiwa nevatengi, zvigadzirwa zvine chekuita nemishini, zvemagetsi, otomatiki, mota, zvekurapa, simba nyowani uye mimwe minda. Kuti tione hunhu hunodiwa hwevatengi vedu, isu takapinza epamberi yekugadzirisa michina uye yekuyedza michina senge mashanu-akabatana Machine (DMG), CNC, WEDM-LS, Mirror EDM, Yemukati / Yekunze Grinder, Laser Kucheka, 3D CMM, Kureba Gauge uye Chinyorwa Kuongorora nezvimwewo kubva kuGerman, Japan, Switzerland neUnited States. Iyo kambani ine yakakwana chaiyo yekugadzirisa michina uye yakasimba yemhando manejimendi manejimendi system, mhando yezvakanaka zvikamu inogona kusangana neepasirese indasitiri zviyero uye zvigadzirwa zvinotengeswa mhiri kwemakungwa.
Zvinhu zvedu zvakajairika isimbi isina chinhu, aruminiyamu, mhangura, yakaderera kabhoni simbi, mapurasitiki enjiniya uye mamwe marudzi esimbi yesimbi. Tinogona zvakare kupa kupisa kurapwa uye kwakasiyana kwepamusoro kurapwa kwevatengi: kupukuta, anodizing, galvanizing, nickel yakanamirwa pamifananidzo, sirivheri yakanamirwa pamoto, passivation uye poda kupfira, nezvimwe.
Mushure memakore gumi ekuvandudza, K-Tek haina chete ine huwandu hukuru hwevashandi uye hwehunyanzvi vashandi uye rakanakisa manejimendi timu, asi zvakare ine yakanakisa timu yekutengesa. Kuitira kuti vatengi vazhinji vazive isu, tinogara tichienda kupasi rose kunotora chikamu mukuratidzira, senge United States, United Kingdom, Germany, Japan zvichingodaro. Takasvika pakuziva nhamba huru yevatengi kubva pakuratidzira, panguva imwecheteyo, vatengi vazhinji vekunze vakauya kuzoshanyira K-Tek fekitori uye vakakurukura nyaya dzekudyidzana.Rutsigiro rwako ndiko kukurudzira kukuru kwatiri. Isu tinotarisirawo kupa yakakwira-mhando machining masevhisi kune vamwe vatengi vanoshaya. Tinokukoka nemwoyo wese kuti ushandire pamwe nekukura pamwechete